Mivonona hiatrika ady | NewsMada
Mivonona hiatrika ady
Par Taratra sur 13/09/2018
Hipoka hatrany ny kianja, tsy efa mpandresy ve ? Tsia ny valiny ! Samy mahafeno kianja, ary mifaninana amin’izany avokoa ireo kandidà, lazaina fa « favoris », amin’ity fifidianana ho avy ity. Samy miandrandra fandresena sy ho avy mamiratra sahady, mahita ireo mpanara-dia mangorompotsy (na arakaraka izay loko misongadina eo).
Fitaka ihany anefa izany… Tsy fiantehatra raha ny lesona notsoahina tamin’izay efa nisy. Raha 20 000 ny mahafeno ny kianjabe iray, mety ny antsasak’ireo no ampy taona afaka mifidy. Ny antsasak’izay indray, tsy manana kara-panondro. Misy tsy ao anaty lisi-pifidianana. Misy tsy hifidy mihitsy satria… tsy zatra an’izany. Izay kely ambiny eo, mety tsy tena resy lahatra fa tonga noho ilay vola kely, ny akanjo, sy ny fampisehoan’ny mpanakanto fotsiny.
Tsy tokony hamita-tena fa indrindra, tsy tokony hanome fanantenana fitaka ny mpanara-dia azy ny kandidà tsirairay. Mbola miankina amin-javatra maro ny fifidianana, indrindra ny fandresena aorian’ny fifidianana.
Ny tokony hataon’ny kandidà sy ny mpanara-dia azy izao, amin’ireny famoriam-bahoaka etsy sy ero ireny, ny fampirisihana ny vahoaka hifidy fotsiny aloha. Raha mba miakatra ny tahan’ny fandehanana mifidy, efa fandresena iombonana izay (raha tena ao anaty ilay fanovana). Manaraka izany, ny fampianarana ny mpifidy sy ny mpanara-dia (mpiondana), hahay hifidy, hahay maharesy na hanaiky faharesena ihany koa.
Tsy mbola misy afaka mitompo teny fantatra hoe efa mandresy, indrindra hoe “premier tour dia vita” izao. Mbola ampy tsara kosa ny fotoana “iatrehana ady” ho an’ny mpifaninana. Ampy hijeren’ny mpifidy izay ametrahany ny hoaviny mandritra ny 5 taona kosa. “Mpifidy” fa tsy “vahoaka”…